TSY fahombiazana matetika sy fiaraha-mientana amin'ny tsipika famokarana sambo mihaja （2）
Telo, warpage 1. Ny Warpage dia mizara ho: warping downward warping, horizontal upping warping, longitudinal up warping, longitudinal downping warping, S-warping warping, two-way warping 2. Ireo loza ateraky ny ady: ① Aorian'ny milina mitafo tapahina, ny taratasy tsy afaka mandeha ho ...
TSY fahombiazana matetika sy fiaraha-mientana amin'ny tsipika famokarana sambo
1. Adhesion tsy dia tsara (lakaoly misokatra, lakaoly sandoka) Ny zava-bita dia: taorian'ny adhesion voalohany ny baoritra nandritra ny 5 minitra, teo ambanin'ny hetsiky ny hery ivelany, dia nisaraka tanteraka ny atiny na ny taila A, B na ny sandwich , ary ny kofehin-taratasy rehetra dia miorim-paka, tsy misosa ary ...
Fahombiazana matetika sy fanoherana ny tsipika famokarana birao mihombo
Fahalalana mifandraika amin'ny indostria momba ny milina fonosana baoritra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-26
Ny taratasy dia vita amin'ny hazo, pulp vita amin'ny volotsangana ary ahitra izay misy akora fibre isan-karazany. Ny hatevin'ny taratasy novokarin'ny fikosohan-taratasy, na natsangana ho taratasy sy baoritra. Saingy tsy hentitra ilay tsipika. Amin'ny ankapobeny, ny lanjan'ny fototra dia latsaky ny 200 g / m na latsaky ny 0.1 mm ny hateviny. Col ...
milina fanaovana boaty mitafo / milina fanamoriana tokana
Ny milina tokana dia misy mpihazona horonan-taratasy sy milina fanorona mihombo iray. Voalohany, nohafanaina ny taratasy fototra mihombo, ary avy eo dia ampiasaina ilay horonana mihorona mba hamolavolana endrika ilaina. Farany, ny lakaoly (adhesive starch) dia apetaka amin'ny tampon-drano mihombo sy ...
Nandritra ny taona maro, noho ny kalitaon'ny vokatra entin'ny orinasako, mpanjifa marobe no nisafidy ny vokatray, Anisan'izany ny mpanjifa avy any Turkménistan, nividy karazan-tsarimihetsika vita amin'ny kôlôjika miisa telo miisa 1800 izy ireo, efa nampiasaina nandritra ny telo taona, Customer Feedba. ..
Manana ekipa matanjaka aorian'ny varotra, ny debugging ary ny fikojakojana fitaovana maharitra manerana ny firenena
[Famintinana famaritana] Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. dia any atsimon'ny renivohitra Beijing sy avaratry Jinan. Manana fitaterana an-drano sy an-tanety tena mety izy io. Orinasa matihanina izy io miaraka amina famokarana milina baoritra sy pr ...
Teknolojia | Inventory ny crux ny carton very sy ny fepetra fanatsarana.
Ny fahaverezan'ny orinasa baoritra dia singa iray lehibe manohina ny vidiny. Raha voafehy ny fatiantoka dia afaka mampitombo ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny lafiny lehibe izy ary manatsara ny fifaninanana amin'ny vokatra. Andao hofakafakaina ireo fatiantoka isan-karazany ao amin'ny orinasa baoritra. Raha tsorina, ny t ...
Rehefa miresaka ny tsy fisian'ny baoritra matevina dia olona maro no hieritreritra baoritra matevina. Raha ny tena izy, io fisehoan-javatra io dia tsy mitovy amin'ny mivadika. Manolo-kevitra ny hanadihady amin'ny lafiny maro toy ny akora, milina taila tokana, flyover, milina fanaovana pasteur, fehikibo conveyor, p ...